Darpan Nepal – पुरुषमा हुने बाँझोपन किन हुन्छ, यस्तो छ कारण ??
पुरुषमा हुने बाँझोपन किन हुन्छ, यस्तो छ कारण ??
Nov 30, 2018Admin123Health0Like
बाँझोपन रोग हो र यो पुरुष या महिला जसलाई पनि हुन सक्छ भन्ने चेतना बिस्तार हुँदै गएको छ। एक वर्षसम्म नियमित शारीरिक सम्बन्धमा रहेर पनि गर्भ रहन नसक्नुलाई बाँझोपन भन्ने गरिन्छ। बाँझोपन हुनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन्। यहाँ भने पुरुषमा हुने एक प्रकारको बाँझोपन बारे जानकारी दिन खोजिएको छ।
Previous Postटी–१० क्रिकेट लिगमा सन्दीपको हालसम्मकै खराब प्रदर्शन Next Postकाचो प्याजको सेवनले हुन्छ यस्तो चमत्कारीक फाईदा